Kuyaziwa ukuthi uMbuso Celestial - uwukuthi China. Nokho, kungani kuleli zwe ibizwa ngokuthi nje - ambalwa azi.
Celestial - a ...
Esikhathini sokuqala, okungukuthi, leli gama kuzwakala "Tianxiang" ngesiShayina. "Celestial" - igama elisetshenziswe amaShayina ukuze ubheke ezweni labo. Ngokwezwi nezwi, ilihumusha ngokuthi "engaphansi kwezulu" ( "tang" - lena ezulwini, "amatende" - ngezansi).
Lisho ukuthini igama elithi leli zwi? Ukuze siphendule lo mbuzo, kudingeka kahle lokumba eziyisisekelo zokubala emkhakheni we nefilosofi Chinese sengqondo, kodwa futhi bayaqaphela ukuthi lokhu kusho ngokuphongoza European. Phela, incazelo yaleli gama lihlotshaniswa yokukhulekelwa kukankulunkulukazi esibhakabhakeni, okuyinto liyanda China futhi ezinsukwini zethu.
Insimu yase-China, ngenxa izici of indawo yayo ezindawo, lingaxhumani zomhlaba. Lena isizathu esiyinhloko ubunjalo amasiko endawo kanye yomhlaba.
Ihlelo lika-esibhakabhakeni wazalwa isikhathi eside kakhulu e-China. Noma kunjalo, nabakhe kuleli zwe engavamile wakwazi ukugcina ke, ngisho noma cha buyinqqikithi zenkolo, futhi ngamasiko. Kuyinto esibhakabhakeni, ngokuvumelana nezinkolelo yamaShayina yasendulo, ungumthombo wokuphila emhlabeni.
ababusi Chinese bebelokhu amanxusa, abantwana bakwa-Ezulwini ukuthi ngokusebenzisa kwabo intando yami njalo. Ngakho-ke, amandla kombusi, kunengqondo futhi wandise ngokucacile ukuba konke itholakala ngenzansi. Ngakho, ekuqondeni nefilosofi Chinese, uMbuso Celestial - kuba impucuko futhi izwe ukuze uwonke. Ngaphezu kwalokho, isiShayina, leli gama lalisho izwe labo nje kuphela, kodwa futhi abanye, "ngesihluku".
Ngomqondo ewumngcingo, uMbuso Celestial - konke okusezulwini nokusemhlabeni kungaphansi umbusi waseChina.
E Beijing, bonke izivakashi ngokushesha eziholela okuthiwa Temple of Heaven - isakhiwo main edolobheni. Kuyinto into engcwele zonke Chinese, umhlobiso yangaphakathi futhi ubuhle ethempelini - kukhona ziyashaqisa. Lesi sakhiwo - waphinda kuqinisekisa ukuthi indlela yokuzinikela kwesibhakabhaka efanele kuleli zwe kuze kube manje.
Ukusetshenziswa kwegama elithi
Igama elithi "uMbuso Ephakathi" e China kwaba fixed ngesikhathi Zhou Dynasty. Nokho, ngalezo zinsuku, ngokusho kwesazi-mlando Yuri Pines, wayengase uqoke kuphela ngokwendawo emaphakathi ingxenye yombuso. Ngokuhamba kwesikhathi, leli gama ivela ngaphezulu futhi muva nje, wabonakala azibhala eziningana classical - "Guo Yu" futhi "Zuo Zhuan".
Ngokuthakazelisayo, inkulumo ethi "izindawo eziphakeme" kodwa China kabanzi ezweni elilodwa kuphela - eRussia. Ngempela, ngokuvamile itholakala ezincwadini, umhlahlandlela izincwadi, iphephabhuku izihloko, kanye nemibiko izindaba Russian. Lapho benza lokhu isiko eRussia - alaziwa.
Britain - "Albion", Japan - "Bona Izwe weLanga Rising", Croatia - "izwe iziqhingi ayizinkulungwane", China - "Celestial" ... Zonke lezi amagama amahle nemicabango kwamazwe ngenkuthalo yawenza by abalobi kanye nezintatheli. Nakuba esimweni China - Chinese ngokwabo shayela njengoba nezwe lakithi, kodwa okholwayo ngobuqotho ukuthi zingabantu iwukuphela ezulwini.
The enhle kakhulu Ossetic: uhlu nabesifazane abahle kakhulu Ossetic
Alyosha lesikhumbuzo - uphawu ubuqhawe nesibindi amasosha aseSoviet, kanye ukwazisa abakhululiwe Europe
Indlela esiphatha ngayo upokisi ezinganeni? Izimpawu izincomo weni nasekwelapheni tifo
Ukunqunywa kwesikhathi kuyi-physics, ifilosofi, Psychology nezincwadi
Lactulose - isiraphu for ekwelapheni ukuqunjelwa in izinsana
Semolina Delicious: zokupheka
Uhlu lwezinhlanzi ze-Splinter Cell: izidingo zesistimu, ukubuyekezwa, usuku lokukhishwa